DAAWO:- Qof aan waligii dalka kabixin ayaa Muqdisho gudaheeda looga helay Coronavirus “Walwal Cusub”. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO:- Qof aan waligii dalka kabixin ayaa Muqdisho gudaheeda looga helay Coronavirus “Walwal Cusub”.
Maxamed Siciid Cabdullaahi Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Caafimaadka XFS oo waraysi siiyay Mustaqbal ayaa ka hadlay kiisaska Soomaaliya ee Cudurka Covid-19, iyo Muwaadiniinta laga haleelay Fayruska ee ku sugan gudaha Soomaaliya.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Caafimaadka XFS waxa uu sheegay in DFS ay diiwaangelisay 7-ruux oo labo kamid ah yahiin ajaanib ka howlgasha Xerada Xalane, kuna xaqiijiyeen baaris ay sameysay Hay’adda Caafimaadka u qaabisan Qaramada Midoobay ee WHO.
Xildhibaan Maxamed Siciid Cabdullaahi Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Caafimaadka Waxa uu sheegay in qof kamid ah Muwaadiniinta kunool Muqdisho oo aan dibadda ka imaan laga helay Coronavirus, kuna jira Xarunta Karantiilka.
Waxa uu sheegay in qof kamid ah dadkii ay hayeen uu ka caafimaaday fayruska Corona, isaga oo tilmaamay in ay ku howlan yihiin la tacaalidda bukaanada kale oo qaarkood jirkooda ka muuqan Covid-19, balse marka la baaro lagu arkayo.
Mustaqbal waxa ay Weydiisay Wasiir ku xigeenka Caafimaadka XFS Xildhibaan Maxamed Siciid Cabdullaahi sida dhibaatada ka dhalan karta dadka Dowladda ay ku dhex karaantiishay Gudaha Magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, Wasiir Ku xigeenka Wasaaradda Caafimaadka XFS waxa ay Mustaqbal weydiisay wada shaqeynta isku xirnaanta wada shaqeynta Isbitaalada Caasimadda iyo kuwa kale ee ku yaalla Xarumaha Dowlad Goboleedyada.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Caafimaadka XFS waxa uu shacabka ka dalbaday in aysan sahlan faafidda Cudurka Corona oo saameyn taban ku yeeshay dalal badan oo lagu tiro in ay yihiin kuwa horumaray.
16-kii Maarso 2020, Wasiirka Caafimaadka XFS Fawsiya Abiikar Nuur ayaa ku dhawaaqday kiiskii ugu horeeyay Covid-19 ee laga helay dalka, waxaana maalin kadib Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre uu ku dhawaaqay in la xayiray duullimaadyada caalamiga ah, lana fasaxay Goobaha Waxbarashada isla markaana la sameeyay xarumo karaantiil.
Previous articleDowladda Mareekanka oo shaacisay Xayawaankii ugu horeeyay ee laga helay Cudurka Coronavirus.
Next articleMaxaad kala socotaa Heerka uu gaaray Cudurka Coronavirus ee kajira Dalka Jarmalka.